अब तीन महिने तालिम पास नगरी बिहे गर्न नपाइने ? – Life Nepali
अब तीन महिने तालिम पास नगरी बिहे गर्न नपाइने ?
एजेन्सी। बिहेका लागि केटाकेटीको मन मिल्नु पर्यो । परम्परागत बिहेमा घरपरिवारको पनि स्विकृति अनिवार्य हुन्छ । यसबाहेक बिहेका लागि कुनै परीक्षा नै पास गर्नुपर्ने नियम दुनियामा कतै सुनिएको थिएन । तर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान इण्डोनेसियामा लागू हुने भएको छ । हो, इण्डोनेसियामा’ बिहे गर्नका लागि अब ३ महिनाको तालिम पास गर्नुपर्ने नियम सुरु हुँदैछ ।
ताकि वैवाहिक जीवनका सम’स्याहरुलाई सहजै हल गर्न सकियोस् र दाम्पत्य जीवनका समस्याकै का’रण स’म्बन्ध नटुटोस् । साथै बिहेलाई कसरी सफल बनाउने र बालबच्चा कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा पनि उ’क्त पा’ठ्यक्रममा सिकाइनेछ । यो कोर्स ३ महिनाको’ हुनेछ । यो पढाई पूरा नगरीकन’ कुनैपनि युवा बिहेका लागि यो’ग्य हुनेछैन । अर्थात् जसले यो पाठ्यक्रमको पढाई पास गर्नेछ, उसले मात्र बिहे गर्न पा’उनेछ ।
Previous पसल फोडेर प्याज चाेरी, पैसा भने छुँदा पनि छोएनन् !
Next मध्यपहाडी क्षेत्रमा मात्र पाइने अनौठो जनावर सालक सिरहामा भेटियो